အတွင်းခံ အင်္ကျီကို ဖွင့်ဟ ပြသခဲ့တဲ့ ထိုင်ဝမ် အမျိုးသမီး တပ်ကြပ်ကြီး မလေး ~ Myanmar Forward
အတွင်းခံ အင်္ကျီကို ဖွင့်ဟ ပြသခဲ့တဲ့ ထိုင်ဝမ် အမျိုးသမီး တပ်ကြပ်ကြီး မလေး
Posted by drmyochit Sunday, May 12, 2013, under သတင်းများ | No comments
ကြာတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒီပုံတွေ အင်တာနက်ပေါ်ရောက်တဲ့ အချိန်တုန်းကတော့ တရုတ်ပြည်မကြီးမှာ ဟိုးလေး တကျော်ကျော် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Chen လို့ အမည်ရတဲ့ တပ်ကြပ်ကြီးမလေးဟာ သင်တန်းတက်နေ တုန်း ဓာတ်ပုံ ရိုက်ရာမှာ အင်္ကျီလေးကို လှစ်ဟပြပြီး ပန်းရောင် ဘရာလေးပေါ် စေတဲ့အထိ သဘော ကောင်းခဲ့ တာကြောင့် အင်တာနက် သုံးသူများကတော့ ဝေဖန်သံတွေ ဆူညံခဲ့ပါသတဲ့။ သူမဟာ အဲဒီ ဓာတ် ပုံ ကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီး အင်တာနက် ဘလော့စာမျက်နှာပေါ် တင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပုံတည်း မဟုတ် တာကြောင့် ထိုင်ဝမ် စစ်သည်မလေးများရဲ့ ဘားတိုက်ထဲက ပုံရိပ်များကို ပထမဆုံး တွေ့မြင် ရခြင်း လည်း ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။
December 15, the indecent self-photos of the Taiwan military is once again circulating on the internet, but this time the main characters are the female soldiers. While receiving training at the logistics school in 2008 March, female Sergent Chen, attached to the Joint Logistics Section5Regional Support Command Transport Battalion, under the encouragement of her fellow soldiers, lifted up her uniform to reveal her pink bra “to take photos for posterity”.
Summarizing Taiwan media reports, this photo ofafemale soldier lifting up her camouflage shirt to reveal her pink bra appeared on the personal blog ofafemale officer recording her military life. Her outrageous behavior attractedastrong netizen response, with this also being the first example of outrageous photos coming out of the barracks since women have entered the military.
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် မန္တလေး ခရီးစဉ် သတင်း နှင့် ဓာတ...
တရုတ် ကျောက်မီးသွေးတွင်း ပေါက်ကွဲမှု ၂၇ ဦး သေဆုံး
MEDIA မဖော်ပြ ရဲသောသတင်း
ဒလ-ပန်းဆိုးတန်း သဘောင်္ကူးတို့ခ တို့မြင့်ကောက်ခံမှုအေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပညာဒါန ကျောင်းအစည်းအဝေး တက်ရောက...
နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ နိုင်ငံစွမ်းဆောင်ရည်ဆု ပေးခဲ့ခြင...
မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း မျိုးဆက်ပွားစီမံကိန်း ဘင်္ဂ...
နိုင်ငံတကာပုဂ္ဂလိကကျောင်း ISM နှင့် ကျောင်းသားမိဘမျ...
မဟာဆန်သl (Mahasen 01B) ရဲ့ ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီးအမှန် (...
SSA(ရွက်ဆစ်)၏ တရားမဝင်စခန်းများအား တပ်မတော်မှ ရှင်...